ရေဆိုးသည်ရေပေးဝေမှုလား။ ရေပေးဝေရေးနှင့်အညစ်အကြေးစွန့်ပစ်မှုသည်လည်းအားနည်းသည် payments.M ။ ခ။ သင်၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပါအကြောင်းအရာများမှစာသားအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသည် (တောင်များနှင့်ရေအေး) ကိုအိမ်ငှားကပေးရသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများ -
သငျသညျတိုက်ခန်းများ၏ရောင်းရငွေအတွက်သတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့မလိုအပ်သည့်အခါ? အဖြစ်ဝယ်အတူသဘောတူညီခဲ့နှင့်ဆေးရုံကဆင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ဦးကနောက်ပိုင်းတွင်, စာရွက်စာတမ်းများ၏ပေးပို့သည့်အချိန်တွင်စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျနော်တို့ပိုက်ဆံ3အထုပ်ကိုခှဲဝေ - ...
ငါ GBS-15 2007g နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပျောက်ဆုံးသွားမပေးတန်ပြန်သငျ့သညျ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေတခုလျှောက်လွှာကိုရေးနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရန်သင့်ကိုယ်စားလှယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်, ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြပေးဖို့ကောင်တာပေါ်တွင်လိုအပ်သောစံကိုက်ညှိကြားကာလများကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး၏တစ်ဦးက ...
တိုက်ခန်းတစ်ခန်းရှိစာတိုက်ပုံးများကိုမည်သူပြင်သင့်သနည်း။ အလေ့အကျင့်ကရွေးချယ်စရာများဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ အမှန်စင်စစ်စာတိုက်ပုံးများသည်နေထိုင်သူများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်“ Russian Post” နှင့်သင့်လျော်သောအလုပ်ကသင့်အားစာတိုက်ပုံးအသစ်များတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အိမ်ခြံမြေရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုစာရွက်စာတမ်းဤသည်မှာလက်မှတ်မဟုတ်၊ သင်လက်ထပ်ထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်အာဏာပိုင်များသို့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြissueနာ၏စျေးနှုန်းမှာ 100 ဖြစ်သည်။
တိုက်ခန်းများ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၏ထောက်ခံမှုအတွက်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများမည်မျှရှိသနည်း ငါအိမ်ခြံမြေအေဂျင်စီကြမ်းပြင်အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ ငါကအကောင်းပြီးသား3နှစ်ပေါင်းကူးမြောက်ခံစားရ, သူတို့ကိုမှတဆင့်တစ်ဦးတိုက်ခန်းဝယ်ယူခဲ့သည်။ )) ဟုတ်တယ်, မူအရ ...
Non-ငွေပေးချေမှုများအတွက်အဆက်ဖြုတ်ပြီးနောက်လျှပ်စစ်မီးချိတ်ဆက်ရန်မည်သို့မည်ပုံ? မေးခွန်းတစ်ခုကိုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလောင်လျှပ်စစ်မီးမဟုတ်တဲ့ငွေပေးချေမှုများအတွက်ပယ်လိုက်နာ? ရှိမရှိ ယင်းကိုလောင်လျှပ်စစ်မီးများအတွက်ငွေပေးချေ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်လျှပ်စစ်မီးစားသုံးသူအစိတ်အပိုင်းအတွက်မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် ...
တင်းပလိတ်များအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နမူနာ၏လွတ်လပ်သောပုံစံအတွက်အိုးအိမ်ရုံးမှတစ်ဦးကနမူနာလျှောက်လွှာ, ငါသည်သင့်ကိုအကြံပေးလို့မရပါဘူး။ သို့သော်စုပေါင်းတိုင်ကြားချက်လုပ်နိုင်တဲ့ရေးသားဖို့အကြံပေးခဲ့သည်။ လူတိုင်းကိုရေးသင့်ပါတယ် ...
အဘယ်မှာရှိထုတ်ပေးမှလူမှုရေးအိမ်ငှားသဘောတူညီချက်ရရှိရန်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်။ သငျသညျယခုတိုငျအောငျရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်။ သငျတို့သ sotsnayma အခြေအနေများအပေါ် munitsipalke တွင်နေထိုင်ကြသည်။ upolnom သွားပါ။ ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုလုပ်ဆောင်။ zhitelstva- ၏အရပျမှာအာဏာပိုင်များ ...
နေစရာတစ်ခုနှင့်တိုက်ခန်းတစ်ခု၏ခြားနားမှုကားအဘယ်နည်း။ နှုတ်ဝမ်းလျှောအချို့မျိုး။ "လူနေမှုနေရာ" ဟူသောအယူအဆသည်တိုက်ခန်း၏သဘောတရားထက်များစွာကျယ်ပြန့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သီးခြားအိမ်နှင့်အခန်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
မိဘများအခြားသောအရပ်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်လျှင်ကသူမ၏အဖွားမှထိုသူငယ်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ? 10 နှစ်ပေါင်းရောက်ရှိမထားပါဘူးသူသည်သူငယ်၏နေအိမ်သို့ရာအရပ်, ထိုမိဘများ၏နေအိမ်သို့သို့မဟုတ်နှင့်တသားတမိဘ၏အရပျက ...
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုငွေပေးချေမှုရမည့် OGPU န်ကြီးဌာန, အ 13.03.2012 5243-AP / 14 ထံမှစာတစ်စောင်အကြံပေး။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းအစိုးရအဖွဲ့၏6မေလ 2011 354 ၏စည်းကမ်းများစေခံရပြောင်းလဲအတည်ပြု ...
အဘယ်အရာကိုတိုက်ခန်း - စင်္ကြံ, loggia, စားစရာခန်း၏အပူareaရိယာတွင်ပါဝင်သည်? သေချာတာပေါ့စင်္ကြံတစ်ခု loggia - မ။ အတွင်းခန်းလျှင်တစ် ဦး စားစရာခန်း, လည်းပါဝင်သည်။ စင်္ကြံနှင့်စားစရာခန်းသည်နေထိုင်ရာinရိယာတွင်မပါ ၀ င်ပါ။
တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံအောက်တွင်ပြည်မှပုဂ္ဂလိကပိုင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲ? အောက်မှာ, ဒါပေမယ့်လည်းအိမ်သူအိမ်သားအနီးမှာမသာ ... ပုဂ္ဂလိကဒေသများ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ပိုင်ရှင်တွေခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းစရာမလိုဘဲ, သူတို့ရဲ့နားလည်မှုအရသိရသည်အီးသုံးစွဲဖို့ခွင့်ရှိသည် ...
ကောင်စီတိုက်ခန်းများ၏ချိန်း, ရေကူးနှင့်အတူရွေးချယ်စရာ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုတက်ကောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကိုက်ညီနှင့် komunalke တှငျနထေိုငျတစျခုအိမ်နီးချင်းရန်။ ထိုသို့သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက် komunalke ဖို့အရေးအပါဆုံးဒေသ၌ရှိ၏ ...
လူမှုရေးအရငှားရမ်းထားသောတိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ နိုင်ငံတော်ခန်းသည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်မိသားစုသည်လူမှုဖူလုံရေးတွင်နေထိုင်သည်၊ အခန်းငှားရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ၊ အခြားအခန်းတစ်ခန်းကိုကြိုတင် ၀ ယ်ယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
အဆိုပါ SDW ကဘာလဲ ??? raarvorarashragyrarvaorvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ဘုံပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ ssssssssssssss အခကြေးငွေ MSW အစိတ်အပိုင်း။ အနုပညာအောက်မှာသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာပြစ်ဒဏ်။ Rospotrebnadzor ၏ 14.7 အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Code ကို။ ပွတ်တိုက်ဇီဝစွန့်ပစ်။ စည်ပင်သာယာအစိုင်အခဲစွန့်ပစ်, သင်သင့်ပါတယ် ...
, utilities များအတွက်ငွေပေးချေ၏စည်းကမ်းချက်များငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြောပြပါ? စာချုပ်နှင့်အညီ။ တစ်ဦးချင်းစီလဆယ်နေ့။ နောက်ပိုင်းတွင်သင်၏အ kvitochki လာ, ဒါသူတို့သင်တန်ပြန်တွက်ချက်ဖို့အတှကျအခြိနျမရှိကြပါဘူး။ သင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ...
13% ကိုဘယ်လိုတိုက်ခန်းတစ်ခုဝယ်ရမလဲ။ ဘယ်စာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်မလဲ။2၏ ၀ င်ငွေခွန်၊ ၀ င်ငွေကြေငြာချက်၊ ရောင်းဝယ်မှုစာချုပ်၊
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,406 စက္ကန့်ကျော် Generate ။